Daawooyinka dhaqameed ee Shiinaha, Soosaarka Dhirta, Miraha Iyo Shaaha ubaxa - HEX
HEBEI HEX IMP. & EXP. COMPANY waa shirkad diirada saareysa dhoofinta geedo cayriin, geedo hore loo farsameeyay, soo saarida dhirta, shaaha ubaxa, shaaha dhirta, soosaarida xoolaha, kaabista caafimaadka dabiiciga. Daaweynta dabiiciga ah ee dabiiciga ah waxaa loo isticmaali jiray daryeelka caafimaadka guud ee adduunka oo dhan qarniyo badan. Dhirtaani waxay ka yimaadaan geedaha, ubaxyada iyo dhirta laga helo duurka waxaana loo beeray sifooyinkooda bogsashada sanado badan.
FAHAN INTA BADAN
COMPANY waxay taxaddar weyn siisaa xulashada geedaha iyo wax soo saarka dhirta. sidoo kale Waxay leedahay saldhig beero-wasakh la'aan-u-gaar ah iyo soo-saare oo ku saabsan ka-shaqeynta daawada dhaqameed ee Shiinaha (TCM) .HEX waxay si taxaddar leh u xushaa soo-saareyaasha oo ay si joogto ah ula socdaan geeddi-socodka xakamaynta tayada alaabteenna.
Waxay taageertaa caafimaadka nidaamka neefsashada, habka difaaca jirka, nidaamka neerfaha, sinus, caloosha iyo caloosha iyo guud ahaan caafimaadka jirka.
Waxay taageertaa caafimaadka habka difaaca jirka iyo nidaamka caloosha. Caawimaadda si loo yareeyo buuxnaanta caloosha. Waxyaabaha ay ka kooban tahay Patchouli, caleemaha Perilla, Angelica dahurica, Atractylodes macrocephala (walaaq-shiil), diirka Tangerine, Pinellia (la sameeyay), Magnolia (oo laga sameeyay sinjibiil), Poria, Platycodon, licorice, caloosha dheriga, jujube, sinjibiil. Qalabka: Waxyaabaha Tilmaamaha ah Badeecadani waa kiniin madow oo urursan; udgoon, macaan iyo xoogaa qadhaadh. Taxaddarrada 1. Cuntadu waa inay ahaataa mid fudud. 2. La talin maayo ...
Daawooyinka shatiga dhaqameed ee Shiinaha waa kaniiniyada, budada, u diyaargarowga kaabsol, dareere afka ah iyo u diyaargarowga dawooyinka dhaqameedka Shiinaha oo laga sameeyay qaybaha dhirta Shiinaha. Waxaa loo isticmaali karaa in lagu daaweeyo cudurada, looga hortago cudurada laguna horumariyo caafimaadka.
Soosaarida Cranberry extract Soosaarka Cranberry wuxuu ka kooban yahay flavonoids dabiici ah iyo Procyanidins, oo soo celin kara firfircoonida Collagen, ka dhigi kara maqaarka mid jilicsan oo jilicsan, waa sunshade dabiici ah, waxay xannibi kartaa waxyeelada UV ee maqaarka, shaqada antioxidant aad u fiican, gabowga, si loo ilaaliyo caafimaadka wadnaha, laakiin sidoo kale ka hortag wax ku ool ah iyo daaweyn ku habboon ee caabuqa kaadi mareenka haweenka ee qaangaarka ah
Soosaarida Diosgenin: Waxaa loogu yeeraa "dahab daaweyn ah" goobta caafimaadka. Diosgenin waa shay aasaasi ah oo cayriin oo loogu talagalay soosaarka hormoonnada steroid. Hormoonnada isteeroydhisku waxay leeyihiin anti-infekshin adag, anti-xasaasiyad, fayraska iyo saamaynta daawooyinka ee shoog-ka-hortagga, waa daaweynta cudurka laabotooyinka, wadnaha, leymokia dhiig-karka, unugyada unugyada maskaxda, cudurrada maqaarka, burooyinka ka hortagga iyo bukaan-socodka muhiimka u ah isticmaalka muhiimka ah. daroogada; Waa alaabta ceeriin ee uurka Ketenolo ...
Stevioside (CNS: 19.008; INS: 960), oo sidoo kale loo yaqaan Stevioside, waa glycoside laga soo saaray caleemaha Stevia Rebaudia (Stevia), oo ah qoys dhir ka tirsan qoyska isku dhafan. Qiimaha kalooriga Stevia waa 1/300 oo keliya oo sukrose ah, ma nuugo ka dib qaadashada jirka bini'aadamka, ma soo saaro kuleyl, wuxuu ku habboon yahay macaanka iyo bukaanka buurbuuran macaaneeyaha. Marka Stevia lagu qaso sukrose fructose ama sonkorta isomerized, macaankeeda iyo dhadhankeeda waa la horumarin karaa. Waxaa loo isticmaali karaa nacnac, keegag, cabitaanno, s ...
Wax ku oolnimada Soosaarida Rose
Wax-ku-oolnimada iyo ujeeddada Dabeecadda jilicsan, waxay fududeyn kartaa shucuurta, dheellitirka endocrine, nafaqeysaa dhiigga, qurxinta daryeelka maqaarka, nidaamisaa beerka iyo caloosha, yareysaa daalka, hagaajinta jir ahaaneed, shaaha kacay wuxuu leeyahay dhadhan jilicsan oo qurux badan, kaas oo fududeyn kara shucuurta isla markaana yareyn kara Niyad jabinta, way hagaajin kartaa e ...
Qaadashada habka Qaado hal qaaddo shaah markasta, qiyaastii 1 ilaa 1.5 garaam, kuna qaado biyo diiran, nus saac quraacda iyo cashada kadib, iyo xitaa nus bil. Qiyaasta maalinlaha Qiyaasta ugu fiican ee maalin walba waa 2 ilaa 3 garaam, hal mar subaxdii iyo hal fiidkii. Waqti qaadashada Sida ku xusan mabaadi'da ...
Halbeegyada Soosaarida Dhirta Shiinaha
Inta badan dawooyinka dhaqameed ee Shiinaha laga soo saaro ayaa badanaa la dhoofiyaa. Tani waxay la xiriiri kartaa xaqiiqda ah in weli ay jiraan kala duwanaansho fara badan oo ku saabsan aragtida dawooyinka Shiinaha ee laga soo saaray dawooyinka Shiinaha. Dad badan ayaa u maleynaya in soosaarida dawada Shiinaha ay aad uga duwan tahay tr ...
Wax-ku-oolnimada Shaaha Shaaha
Dib-u-heshiisiin Spleen Iyo Caloosha ubax Jarmal ubax waxay ka kooban tahay xaddi badan oo fiitamiin C ah, iyo miraha iyo ubaxyada kala duwan waxay leeyihiin astaamo u gaar ah. Kuwaas waxaa ka mid ah, canab macaan dhadhan ahaan, dao waa mid deggan oo dabiici ah, waxay nafaqeysaa beerka iyo kelyaha, waxay nafaqeysaa qi iyo dhiig, waxay kor u qaadaa dheecaanka jirka, waxay horumarisaa ...
Qalabaynta Qalabka Dawooyinka
Nidaamka saafiga ah Ka saar haramaha, ciidda iyo qaybaha aan dawooyinka lahayn. Marka loo eego shuruudaha noocyada kala duwan, qaarkood waxay u baahan yihiin inay xoqaan maqaarka, sida xididka cad ee cad; qaar baa u baahan in la jaro jilif jilicsan, sida guf; qaar baa u baahan inay ka saaraan madaxa cawska, xididka buunshada iyo laamaha hadhay oo ay ka baxaan ...